मैले निवास कार्ड कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
म नयाँ ठेगानामा सरें। मैले मेरो निवास कार्डमा भएको ठेगाना कसरी परिवर्तन गर्न सक्छु?
मैले मेरो निवास कार्ड हराएँ। यो पुन: जारी गर्न मैले के गर्नुपर्छ?
निवास व्यवस्थापन प्रणालीले मध्य- र दीर्घ-कालीन विदेशी निवासीहरूलाई लक्षित गर्छ। निम्न मध्ये कुनैमा पनि नपर्ने व्यक्तिहरूले निवास कार्ड प्राप्त गर्न सक्छन्।
बसाइको अवधि तीन महिना वा कम भएका व्यक्तिहरू
आफ्नो निवासको स्थिति “अस्थायी आगन्तुक” भएका व्यक्तिहरू
आफ्नो निवासको स्थिति “नीतिज्ञ” वा “औपचारिक” भएका व्यक्तिहरू
माथि उल्लेखित 1 –3 अन्तर्गत पर्ने न्याय मन्त्रालयद्वारा पहिचान गरिएका व्यक्तिहरू
विशेष स्थायी निवासीहरू
निवासको स्थिति नभएका व्यक्तिहरू
प्रवेशको पोर्टमा तपाईंको राहदानीमा ल्यान्डिङ अनुमति दिइन्छ। तपाईं ल्यान्डिङ अनुमतिद्वारा मध्य- वा दीर्घ-कालीन निवासी बन्नुभयो भने, तपाईंलाई निवास कार्डको अनुमति प्रदान गरिनेछ। निवास कार्ड नारिता विमानस्थल, हानेडा विमानस्थल, चुबु विमानस्थल, कान्साइ विमानस्थल, सिन-चिटोस विमानस्थल, हिरोसिमा विमानस्थल वा फुकुवटा विमानस्थलमा जारी गरिन्छ। तपाईंले माथि सूचीबद्ध गरिएका बाहेक अन्य प्रविष्टिको पोर्ट प्रयोग गर्नुभएको छ भने, तपाईंले स्थानीय नगरपालिका कार्यालयमा निवासको सूचना पेश गरेपछि तपाईंलाई निवास कार्ड पत्राचार गरिनेछ।
तपाईं आफ्नो हालको नगरपालिकादेखि अर्को नगरपालिका वा देशमा सर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो हालको र नयाँ नगरपालिकामा बाहिर-सर्ने सूचना र भित्र-सर्ने सूचना पेश गर्न आवश्यक छ। बाहिर-सर्ने सूचनालाई बाहिर-सर्ने मितिदेखि 14 दिनअघि आफ्नो हालको नगरपालिकामा पेश गर्न सकिन्छ। तपाईंको हालको नगरपालिकाले बाहिर-सर्ने प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ, त्यसैले तपाईंलाई भित्र-सर्ने मितिदेखि 14 दिनभित्र आफ्नो नयाँ नगरपालिकालाई यो पेश गर्नुपर्छ। तपाईं समान नगरपालिका भित्र सर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सर्ने मितिदेखि 14 दिनभित्र आफ्नो नगरपालिकालाई सर्ने सूचना पेश गर्नुपर्छ। तपाईंले आफ्नो नयाँ नगरपालिकाको कार्यालयमा भित्र-सर्ने सूचना पेश गर्नुभएपछि तपाईंको निवास कार्डको पछाडि नयाँ ठेगाना छापिनेछ।
तपाईंले आफ्नो निवास कार्ड हराउनुभयो भने, तपाईंले प्रहरीलाई यो हराएको/चोरी भएको रिपोर्ट गर्नुपर्छ र 14 दिनभित्र क्षेत्रीय आप्रवास विभागमा यसको पुन: जारीको लागि आवेदन दिनुपर्छ। तपाईंको निवास कार्ड अत्यन्त विकार भएमा तपाईंले पुन: जारीको लागि आवेदन दिनुपर्छ। माथिका कारणहरूका लागि पुन: जारी निःशुल्क छ। अन्य कारणहरूका लागि पुन: जारी गर्न 1,000 येन लाग्छ।
निवास कार्डको पुन: जारीको लागि आवेदन (क्षेत्रीय आप्रवास विभागहरू)
1 फोटो (W3cm x H4cm. फोटोमा आवेदक मात्र हुनुपर्छ। गत तीन महिनामा खिचेको हुनुपर्छ।
टोपी हुनुहुँदैन। सादा पृष्ठभूमि। तपाईं 16 वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने आवश्यक छैन।)
<तपाईंले आफ्नो निवास कार्ड हटाउनुभयो भने> क्षति प्रमाणित गर्ने कागजात
(हराएको/चोरी भएको सम्पत्ति प्रमाणपत्र, विपत्ति पीडित प्रमाणपत्र, आदि)
<तपाईंसँग आफ्नो निवास कार्ड छ भने> निवास कार्ड
निवासको स्थितिको लागि राहदानी वा योग्यताको प्रमाणपत्र
<तपाईंले आफ्नो निवास कार्ड हराउनुभयो भने> पहिले प्रदान गरिएको निवासको स्थिति अन्तर्गत अनुमति दिए बाहेक अन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने अनुमति